Wararkii ugu dambeeyay qaraxii xaley ka dhacay Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyay qaraxii xaley ka dhacay Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay qaraxii xaley ka dhacay Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa qarax Khasaaro geystay oo Xaley Fiidkii ka dhacay agagaarka Isgooyska Xaaji Baasto ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxaan oo jugtiisa laga maqlay qeybo ka mid ah Degmooyinka Gobolka Banaadir,ayaa waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo ku aadan qaraxa nooca uu ahaa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa Miino wadada dhinaceeda laga dhigay,halka warar kalana ay sheegayaan in uu ahaa Gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa.
Dad Goob jogayaal ayaa sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 5 Ruux oo Saddex ka mid ah ay ahayeen Askari ilaalo u aheyd Xildhibaan C/qaadir Carabow, oo katirsan Golaha Shacabka,kaas oo goobta marayay xiliga uu qaraxa dhacayay,halka labada kalana ay ahayeen dad Shacab ah oo goobta ku sugnaa.
Sidoo kale waxaa qaraxa ku dhaawacmay ku dhaawad 10 Ruux oo shacab ah,kuwaas oo loo cararay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Wali laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya, kama aysan hadlin khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay qaraxa.
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay Mas’uuliyada qaraxaan khsaaraha geystay ee xaley ka dhacay wadada Maka al-mukarama ee Magaalada Muqdisho.
Sikastaba ha ahaate Qaraxaan xaley ka dhacay Wadada aadka u mashquulka badan ee Maka al-mukarama, ayaa ku soo aadaya xili maanta qarax miino oo khasaaro geystay uu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho, kaas oo lala eegtay Gaariga HILUX ah oo ay wateen Injineero u dhashay Dalka Turkiga.
Previous articleMuxuu yahay walaaca laga muujiyay qorshaha maamul dhisidda Galmudug?
Next articleBanaanbax Ka Socoda Magaalada Muqdisho